Tany amin’ny fivoriamben’ireo mpisehatra miteny frantsay ireo, izay natao tany Libreville Gabon no nahalany izany teratany Malagasy izany. Misy ny tombony amin’izao fiaraha-miasa izao indrindra ny eo amin’ny lafin’ny fambolena sy ny fiahiana ara-tsakafo ary indrindra ny fampiroboroboana ny Orinasa Madinika sy Salantsalany (PME) sy ny fandraharahana amin’ny ankapobeny. Nivoitra tamin’ity fivoriana ity ihany koa ny tsy maintsy irosoana amin’ny toekarena mifototra amin’ny nomerika sy ny varotra elektronika. Mbola hanamarika ity fihaonana ity ihany koa ny fisian’ny famelabelaran-kevitra tanterahan’ny Departemantan’ny fandraharahana ara-toekarena eo anivon’ny kaomisionan’ny Fivondronam-be Afrikana . Tanjona ihany koa ny hampihaonana ireo tompon’andraikitra ambony miaraka amin’ireo matihanina avy amin’ireo sehatra tsy miankina. Ny fihaonana ao amin’ny Libreville dia hanatsarana ny fitantanana sy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpianatra sy mpiasa avy any ivelany.